Sakafo Misotro ny tarehy dia toy ny firavaka tsara tarehy izay azonao sotroina! Nanamboatra zavatra roa natokana ho an'ny dite izahay: vatomamy Rock sy voasarimakirana. Mora mihinana ity famolavolana ity. Amin'ny fampidirana tsaramaso voasarimakirana ho an'ny firafitry ny vatomamy, ny tsirony dia lasa tsara kokoa ary mitombo ny lanjan'ny sakafo nohon'ny otrikaina voasarimakirana. Nosoloan'ireo mpamolavola ireo tapa-kazo izay nisy kristaly vatolampy namboarina taminà voasarona voasarimakirana maina. Ny Drink Beauty dia ohatra feno amin'ny tontolo maoderina izay mitondra fahatsarana sy fahombiazana miaraka.
Zava-Pisotro Zavaboara vaovao ity miaraka amin'ny Chia ity, ny hevi-dehibe dia ny famolavola cocktail izay misy phase tsiro maro. Io endrika io koa dia avy amin'ny loko samihafa azo jerena ao ambanin'ny hazavana mainty izay mahatonga azy ho lanonana ho an'ny fety sy klioba. Chia dia afaka mitroka sy miaro tsirony sy loko rehetra rehefa misy olona manamboatra sipa miaraka amin'ny Firefly dia afaka mahatsapa ny tsiro hafa an-davaky ny dingana. Ny vidin'ny sakafo amin'ity vokatra ity dia avo kokoa raha ampitahaina amin'ny sotrokely hafa ary izany rehetra izany dia noho ny sandan'ny lanjan'i Chia sy ny kaloria ambany. . Io endrika io dia endrika vaovao ao amin'ny tantaran'ny zava-pisotro sy ny bisikileta.
Capsule Wild capsule Wild Cook, dia kapoaka misy fangaro voajanahary ary namboarina hamoka sakafo sy hanangana tsiro hafa sy hanitra. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny fomba tokana anaovana setroka sakafo dia ny fandoroana karazana hazo isan-karazany fa ny marina dia azonao atao ny mifoka sigara miaraka amin'ny akora maro sy ny hanitra vaovao. Ireo namorona dia nahatsapa ny tsy fitovian'ny tsiro manerana an'izao tontolo izao ary izay no antony mahatonga an'io famolavolana io dia mora apetraka tanteraka rehefa miresaka momba ny fampiasana any amin'ny faritra samihafa. Ireo kapôma ireo dia mifangaro amin'ny singa mifangaro sy tokana.
Ny Vy Vita Amin'ny Curling
Ny Vy Vita Amin'ny Curling Ny vy maneno curling nano dia mampiasa teknolojia fiantraikany ratsy. Miaro ny endrika matevina, malefaka mamirapiratra mandritra ny fotoana maharitra. Ny fantsona curling dia nandalo coating nano-seramika, mahatsapa tena malefaka. Mamolavola moramora ny volo ary vetivety amin'ny rivotra mafana avy amin'ireo tsikera miiba. Raha ampitahaina amin'ny tendron-tsolika tsy misy rivotra, dia afaka mamarana amin'ny kalitao volo malefaka ianao. Ny loko fototra ny vokatra dia malefaka, mafana ary madio matte fotsy, ary ny loko accent dia volamena mavokely.
Sezitetika Alika Horonam-Boankazo Misy Tantely Sakafo Zava-Pisotro Capsule Ny Vy Vita Amin'ny Curling